नेपालका कलेजहरु किन गैरकानुनीरूपमा विदेश पैसा पठाउछन् ? | Pennepal
Home अर्थ/बाणिज्य नेपालका कलेजहरु किन गैरकानुनीरूपमा विदेश पैसा पठाउछन् ?
नेपालका कलेजहरु किन गैरकानुनीरूपमा विदेश पैसा पठाउछन् ?
काठमाडौं । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरुले गैरकानुनी रुपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको पाइएको छ । कलेजहरुले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै प्रक्रिया मिचेर अमूक संस्थाका माध्यमबाट रकम पठाएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा काठमाडौँका ब्रिटिस, इस्लिङ्टन, हेराल्ड, विराटनगरको मेरील्याण्ड, इटहरीको इटहरी इन्टरनेसनल र पोखराको इन्फर्मेटिक्स कलेजले अवैध प्रक्रियाबाट पैसा विदेश पठाएको भेटिएको हो । फैसला कार्यान्वयन तथा कानुन शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा गठित तीन सदस्यीय समितिले ती कलेजमाथि छानबिन गरेको थियो ।
कलेजहरुले प्रचलित आयकरअनुसार दुई प्रतिशत शिक्षा कर र अग्रिम कर ९टीडीएस० १५ प्रतिशतसमेत नतिरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशमा रकम पठाउँदासमेत कलेजहरुले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । ती कलेजले विद्यार्थीलाई तोकिएको बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोल्न लगाउने र उक्त रकम संस्थाको खातामा सारेर विदेश पठाउने गरेका हुन् ।
कलेजले रकम उठाउन र विदेश पठाउन छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गरेका छन् । छानविन समितिले शिक्षण संस्थाले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य सिफारिस लिने व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ९५ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालित छन् ।
पेट्रोल पम्पको लाम यसरी घट्यो
अदालतका श्रेस्तेदार घुससहित पक्राउ